Google Play Store က Free ပေးတဲ့ Game , App တွေကို IDM နဲ့ ဒေါင်းယူနိုင်ပြီ ~ mgkhainghtoo
21:24 မောင်ခိုင်ထူး No comments
ဒီနည်းလေးကို ကျနော် စမ်းကြည့်တာ အမှန်ကန် လွယ်ကူပြီး အသုံးတည့်တဲ့ အတွက် ကို ၀င်းကမ္ဘာကျော် ဆီကနေ ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်တာပါ။ အရင် ကွန်ပြူတာပေါ်ကနေ apk တွေ ဒေါင်းရအောင်ဆိုတဲ့ ပို့စ်ကို အရင်က အသုံးပြုဖူးပါတယ်။ အခုလောက် မလွယ်၊အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ ဒါလေးကတော့ လူတိုင်း လုပ်နိုင်မှာပါ။အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီ။
Play Store က Free ပေးတဲ့ ဖိုင်လ်ဆိုက်ဒ်ကြီးတဲ့ Game တွေ , App တွေကို ဒေါင်းယူ ကြတဲ့အခါ....
Broswer ကပါတဲ့ Downloader (သို့) Phone နဲ့ ဆွဲရတာ အရမ်းကြာပါတယ်..
ခုတော့ အဲ့ဒီပြဿနာကို ဘာဆော့ဖ်ဝဲ မှ သုံးစရာမလိုပဲ Internet Download Manager (IDM) နဲ့ မြန်မြန် ဆန်ဆန် အလွယ်တကူ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ....
APK ဖိုင်လ်တွေကို ကွန်ပျူတာပေါ်ကနေ တိုက်ရိုက် ဒေါင်းယူချင်တဲ့ , ဒေါင်းမရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်လည်း
တခါထဲ အဆင်ပြေသွားစေမဲ့ နည်းလေးပါ.... IDM နဲ့ မဒေါင်းချင်လည်း Browser က Downloader နဲ့ Auto ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..
နည်းလမ်းကတော့.... အရင်ဆုံး (IDM) Internet Download Manager ကို နည်းနည်းပြင်ပေးဖို့လိုပါတယ်.. IDM ကိုဖွင့်ပြီး Options ကို နှိပ်ပါ...
File types မှာပုံထဲကအတိုင်း Space ခြားပြီး APK ရေးထည့်ပါ..(တခြား ကိုယ်ဒေါင်းယူစေချင်တဲ့ File Types တွေကိုလည်း အဲ့ဒီအတိုင်း ရေးထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်)
OK နှိပ်ပြီး Save လိုက်ပါ...။
ဒါဆိုရင် APK ဖိုင်လ်တွေကို IDM နဲ့ ဒေါင်းယူဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ....။
Play Store ကိုသွားပါ.... မိမိ ဒေါင်းယူလိုတဲ့ Game,App နေရာက URL ကို (Link) ကို Copy ကူးပါ...
ပြီးရင် ဒီ Link ကို http://apps.evozi.com/apk-downloader/ နှိပ်လိုက်ပါ...
Package name or Google Play URL အောက် Box ထဲမှာ Right Click > Paste ချပြီး....
Generate Download Link ကို နှိပ်လိုက်ပါ...
ခဏနေရင် အောက်မှာ အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ Click here to download ကိုနှိပ်ပြီး Internet Download Manager (IDM) နဲ့ အဆင်ပြေစွာဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ....
နောက်တစ်ခု ထပ်ဒေါင်းယူတော့မယ်ဆိုရင်တော့ APK Downloader Page ကို F5 Key ကို နှိပ်ပြီး Refresh လုပ်ပေးပါ...
Credit to ဝင်းကမ္ဘာကျော်